Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Cusbitaalka Shiinaha iyo Xarumaha Ward - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka
Cisbitaalka iyo Xarumaha Ward (qalabka caafimaadka) waxay tixraacaan qalabka, qalabka, qalabka, alaabta ama maqaallada kale ee loo isticmaalo jidhka bini'aadamka kaligiis ama isku dhafan, oo ay ku jiraan software loo baahan yahay. Waxaa jira saddex qaybood oo qalab caafimaad ah, kuwaas oo kala ah qalabka lagu baadho, qalabka daaweynta iyo qalabka caawimada.
Cisbitaalka iyo Xarumaha Ward ee Bailikind waa kuwo tayo leh oo la isku halayn karo oo buuxa, oo ay ku jiraan qalabka sariirta isbitaalka, alaabta guriga, sahayda duritaanka iyo faleebada, qalabka suuxinta iyo agabka, alaabta daawaynta neefsiga, qalabka qolka qalliinka, ogaanshaha caafimaadka iyo alaabo kale.
Isticmaalka sayniska ee Cisbitaalka iyo Xarumaha Ward waa cabbir muhiim ah si loo hubiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Baili Kant daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Kormeeraha Cadaadiska Dhiiga Curcurka ee Wireless
Kormeeraha cadaadiska dhiigga ee curcurka ee bilaa-wireless: Habka wareegga dhiigga waa kanaalka uu dhiigga ku dhex qulqulo jirka. Waxay u qaybsantaa laba qaybood: habdhiska wadnaha iyo xididdada dhiigga. Habka lymfatic waa qalab caawiya habka xididka. Nidaamka wareegga dhiigga guud waa habka wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Wireless Fat Analyzer
Falanqeeyaha Dufanka Wireless: Qalabka cabbiraadda dufanka waa isticmaalka habka is-hortaagga noolaha, habka cabbiraadda aan fiicneyn, oo loo isticmaalo in lagu saadaaliyo heerka buurnaanta aadanaha, si loo ogaado heerka qalabka dufanka jidhka bini'aadamka.
Tijaabada Khamriga Shakhsi ahaaneed iyo Xirfadlaha
Tijaabaha Khamriga Shakhsi ahaaneed iyo Xirfadlaha: Marka shidma gaasku aanu ogaan karin khamriga, heerka biinka shanaad ee lagu daray A waa hooseeyaa. Marka dareemaha gaaska uu ogaado khamriga, iska caabbinta guduhu waxay noqotaa mid hooseeya, si heerka pin-ka shanaad ee A uu noqdo mid sarreeya. A waa riixaha bandhiga, kaas oo leh 10 wax soo saar, iyo terminal kasta oo wax soo saar ahi wuxuu wadi karaa diode iftiin-bixiya. Soo-bandhigida A ayaa go'aamisa isku xigxiga iftiinka diode-ka-iftiinka iyadoo loo eegayo heerka biinka 5-aad. Mar kasta oo ay ka kooban tahay aalkolada, ayaa sii weynaan doonta isku xigxiga iftiinka tuubada labaad. Shanta ledh ee sare waa casaan, taasoo muujinaysa inay ka sarreeyaan heerka badbaadada. Shanta ledh ee soo socota waa cagaar, taas oo muujinaysa heer badbaa......
Kormeerka Heerka Wadnaha
Kormeerka Heerka Wadnaha: Mitirka garaaca wadnaha waa mid loo isticmaalo in lagu baaro garaaca wadnaha barnaamijka, si loo eego haddii cadaadiska dhiiggaaga, garaaca wadnahaagu uu yahay mid caadi ah, u kaalay tijaabada, si aad u aragto sida jidhkaagu u yahay.
Korjoogteynta Cadaadiska Dhiiga Curcurka ee Dijital ah
Korjoogteynta Cadaadiska Dhiiga Curcurka Dijital ah: Habka wareegga dhiigga waa kanaalka uu dhiigga ku dhex qulqulo jirka. Waxay u qaybsantaa laba qaybood: habdhiska wadnaha iyo xididdada dhiigga. Habka lymfatic waa qalab caawiya habka xididka. Nidaamka wareegga dhiigga guud waa habka wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Falanqeeyaha Dufanka Dijital ah
Falanqeeyaha Dufanka Dijital ah: Qalabka cabbiraadda dufanka waa isticmaalka habka is-hortaagga bioelectrical, habka cabbiraadda aan fiicneyn, ee loo isticmaalo saadaalinta heerka buurnaanta aadanaha, si loo ogaado heerka qalabka dufanka jidhka bini'aadamka.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.